လစဉ်ရာသီလာတာက ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး – Purple Feminist Group
ထိုင်ခုံကမထခင် ဘေးနားက သူငယ်ချင်းကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကျိတ်မှာရတယ်။ ပေနေရင် အပေါ်အင်္ကျီကို ခါးမှာပတ်ရတယ်။ ရာသီလာရင်ဖုံးရဖိရ ကာကွယ်ရတာတွေက သိုင်းလောကထက် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်တော့ ကျောင်းက အိမ်သာထဲမှာ 50 cents ထည့်ရင် Pad (ဂွမ်းထုပ်အသေး) တခု ရတယ်။ အဲတော့ ကိုယ်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတုန်းက ဂွမ်းထုပ်ဖွတ်နည်းပညာက အဲမှာ ထုတ်သုံးစရာ မလိုတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျောင်းကဆေးခန်းမှာ ဂွမ်းထုပ်တွေကို အိပ်လှလှလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးအလကားပေးတယ်။
အဲဒီအိတ်ထဲမှာ ဂွမ်းထုပ်အပြင် Tampon (မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဟင်? ဂွမ်းချောင်းလို့ခေါ်လို့ရလား?) ပါထည့်ပေးထားတယ်။ အဲ့ ဂွမ်းချောင်းကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာက အစ လမ်းညွှန်စာရွက်လေးပေါ်မှာ ပုံတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြထားတယ်။ (ဂွမ်းချောင်းအကြောင်းနောက်မှသေသေချာချာရေးပါဦးမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဂွမ်းချောင်းသုံးရင် အပျိုရည်ပျက်တယ်လို့ ထင်တဲ့လူရှိလို့ )
ဒီတော့ကျောင်းသွားတက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာတော့ ကိုယ်တွေဟာ ဂွမ်းထုပ်ဖွတ်နည်းကျမ်းတွေကို မေ့သွားတဲ့အပြင် ဂွမ်းထုပ်သွားဝယ်တိုင်း ကျွပ်ကျွပ်အိတ် အမဲနဲ့ထည့်တာတို့ သတင်းစာနဲ့ ပတ်ပေးတာတို့ကို သတိထားပြီး ငြင်းတတ်လာတယ်။ နောက်ပြီး အခုဆို ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာ ဂွမ်းထုပ်အပို အမြဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားပြီးမှ တက်လာတဲ့ သိုင်းကျမ်းအသစ်ပါ။
ဂွမ်းထုပ်အပြင် ဘာကို ကျွပ်ကျွပ်အိတ် အမဲနဲ့ထည့်ပေးလဲဆိုတော့ ဘီယာတို့၊ အရက်တို့ကိုရော အိတ်အမဲနဲ့ထည့်ပေးတယ်။ ဆိုတော့ကား ဒီပစ္စည်း ၂ မျိုးရဲ့ တန်ဖိုးကတူညီတာလား? ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာ ကလေးတယောက်ဖြတ်သွားလို့ အဲဒီအိတ်အမဲထဲက ဘာတွေလဲလို့မေးရင် ဘယ်လိုဖြေလေ့ရှိသလဲပေါ့နော်။
ကျွန်မအနေနဲ့တော့ လစဉ် ဂွမ်းထုပ်ဝယ်ရတာ မရှက်ပါဘူး။ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ဂွမ်းထုပ်သွားဝယ်ရင် အိတ်အမဲနဲ့အပိုထပ်ဆောင်းပြီး မထည့်ပေးဖို့၊ လစဉ်ရာသီလာတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သိုင်းကျမ်း အသစ်ကို ဒီနေရာကနေ လက်ဆင့်ကမ်းပါရစေ။
ဆောင်းပါးရှင် – သင်းသင်း